Israa’iil ayaa weeraro ku qaadeysa Gaza oo go’doonsan ka dib gantaallo la soo riday - Wardeeq 24 TV Israa’iil ayaa weeraro ku qaadeysa Gaza oo go’doonsan ka dib gantaallo la soo riday Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Israa’iil ayaa weeraro ku qaadeysa Gaza oo go’doonsan ka dib gantaallo la...
Israa’iil ayaa weeraro ku qaadeysa Gaza oo go’doonsan ka dib gantaallo la soo riday
Milatariga Israel ayaa fuliyay duqeymo ay ku bartilmaameedsanayeen fariisimaha Xamaas ee Marinka Qaza ee go’doomiyey iyadoo iska hor imaadyadii fiidkii ee u dhaxeeyey booliska Israa’iil iyo Falastiiniyiinta ay ka socdeen magaalada Qudus.
Wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Maan ayaa sheegtay in taangiyada ciidamada Israel ee u dhow xayndaabka adag ee ka soocaya Marinka Gaza iyo Israel ay bilaabeen weeraro ay ku qaadayaan deegaanka Sabtidii. Wax dhaawac ah lama soo sheegin.
Dagaallo ka dhacay Yeruusaalem habeenkii labaad rabshado
Isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay Qudus kadib socodkii midigta fog ee Israel
Israel ayaa amar ku bixisay ruxitaanka guryo cusub oo laga dumiyey xaafadda Silwan, Jerusalem
Ciidamada Israel ayaa sheegay in ay ku garaaceen kaabayaasha dhulka hoostiisa iyo gantaalaha ay ka ridayaan Gaza “iyagoo ka jawaabaya gantaallo lagu soo ganay Israel habeenkii oo dhan”.
Waxay sheegtay in gantaalada qaar qarxeen kahor intaysan gaarin Israel kuwa kalena ay dhexda u xirteen nidaamka difaaca cirka.
Xamaas ma sheegan mas’uuliyadda weerarada gantaalada, laakiin qaab dhismeed militari oo yar oo gacan saar la leh garabka bidix ee caanka ah ee xoreynta Falastiin ayaa sheegay inay soo rideen qaar ka mid ah gantaalada.
Previous article53 badmaax ayaa loo maleynayaa inay dhinteen ka dib markii la helay markab quusiyey badda Indonesia
Next articleCiidamo militari ah oo kasoo horjeestay mudo kororsiga Farmaajo iyo xaalada Muqdisho oo kacsan